- ताथलीको देवी माविलाई चार करोडमा निर्मित भवन हस्तान्तरण
ताथलीको देवी माविलाई चार करोडमा निर्मित भवन हस्तान्तरण
भक्तपुरः देवी माध्यमिक विद्यालयलाई रु. चार करोडको लागतमा बनेको भवन हस्तान्तरण गरेको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ ताथलीको सौडोलस्थित सो विद्यालयको नवनिर्मित भवन बिहीबार विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
वि.सं. २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयको सो भवन निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको सहयोग रहेको थियो । केन्द्रीय कार्यान्वय इकाई (शिक्षा) र जिल्ला आयोजना इकाई (शिक्षा) को सहकार्यमा डीआरएसपी प्रथम कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित सो भवनको उद्घाटन सांसद प्रेम सुवालले गरेका थिए ।
सांसद सुवालले उद्घाटन गरेपछि जिल्ला आयोजना इकाई (शिक्षा) का प्रमुख भरतबहादुर श्रेष्ठले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णराम बासुकला र विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजाराम छुकांलाई संयुक्त रुपमा विद्यालयको साँचो हस्तान्तरण गरे ।
। भवन निर्माणका लागि रु. ३ करोड ७३ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।
हाल ६ सय ५ विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालयले नयाँ भवन पाएसँगै शैक्षिक क्रियाकलापलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक छुकांले बताए । ‘भूकम्पका कारण भएको भवन क्षति हुँदा ठाउँ अभाव भएको थियो, हामीले ७ कोठे भवन पाएपछि समस्या हल हुने भएको छ ।’ उनले भने ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता : सुवाल
यसैबीच सांसद सुवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
भवन उद्घाटनपछि विद्यालयले भूकम्पप्रतिरोधी अत्याधुनिक भवन पाएपछि त्यसको सदुपयोगमा विद्यालयले ध्यान दिन अनुरोध गर्दै विकासका लागि विदेशीको भर पर्न नहुनेका जोड दिए ।
उनले अहिले महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा अझ बढी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जरुरी महसुस भएको जनाउँदै सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको बताए ।
उनले अहिले पनि सरकार एमसीसी पास गराउन उद्यत रहेको चर्चा गर्दै सरकार देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा परनिर्भर बनाउनेतिरै केन्द्रीत रहनु विडम्वनाको विषय भएको उल्लेख गरे ।
सांसद सुवालले कोभिड १९ को संक्रमणले विकासोन्मुख देशका गरिब जनतालाई समस्या भएको बताए । कोरोनाबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी व्यवहारलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले विद्यालयले नयाँ भवन पाए पनि विद्यार्थीको पठनपाठनबारे शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक बन्दोबस्त नगर्दा लाखौं विद्यार्थी पढाइबाट बञ्चित हुनु परेकाले तत्काल विकल्प दिनुपर्ने पनि बताए ।
सोही अवसरमा सांसद सुवालले विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने परामर्शादाता, इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीलाई कदर पत्र प्रदान गरेका थिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णराम बासुकला, शिक्षक राजेन्द्रकुमार साखकर्मीले विद्यालयले दिने शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन विद्यालय परिवार एकवद्ध भई लागिरहेको बताए ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असोज २३, २०७७, १४:१९